Cambridge English Online Classes – BSI Learning Academy
Home Cambridge English Exams Cambridge English Online Classes
Admin July 23, 2020 November 15, 2020 Cambridge English Exams
🔹 Key English | CEFR level A2 |online class for adults
Section A – 7:00 pm to 8:30 pm (Mon & Wed)
**Starting Date – 23rd November 2020
Section B – 5:00 pm to 6:30 pm (Tue & Thu)
**Starting Date – 17th November 2020
3 hours of teaching and3hours of self-study per week.
Fees: 90,000 kyats per month (8 sessions in total)
🔹 Preliminary English | CEFR level B1 |online class for adults
**Starting Date – 24th November 2020
Section B – 3:00 pm to 4:30 pm (Mon & Wed)
Section C – 6:30 pm to 8:00 pm (Sat & Sun)
**Starting Date – 5th December 2020
🔹 First English |CEFR level B2 | online class for adults
Section A – 8:30 am to 10:00 am (Sat & Sun)
**Starting Date – 21st November 2020
Section B – 8:00 pm to 9:30 pm (Mon & Wed)
**Starting Date – 30th November 2020
Fees: 100,000 kyats per month (8 sessions in total)
New Course starts every4weeks.
Online class: interaction on Zoom
Starters (age6to 8)
Weekend – 10:00 am to 12:00 pm (Sat & Sun)
Weekday – 10:00 am to 12:00 pm (Tue & Thur)
**New Course starts every month.
Fees: 80,000 kyats per month (8 sessions in total)
Movers (age 8 to 10)
Weekend – 3:00 pm to 5:00 pm (Sat & Sun)
Weekday – 3:00 pm to 5:00 pm (Wed & Fri)
Flyers (age 10 to 12)
Weekend – 1:00 pm to 3:00 pm (Sat & Sun)
Weekday – 1:00 pm to 3:00 pm (Tue & Thur)
KET (CEFR A2) for Teenagers
Weekday – 1:00 pm to 3:00 pm (Mon & Wed)
4 hours of teaching and2hours of self-study per week.
PET (CEFR B1) for Teenagers
Weekday – 3:00 pm to 5:00 pm (Mon & Wed)
🔹 First English (CEFR level B2) for teenagers
Section A –3:00 pm to 5:00 pm (Sat & Sun)
Section B – 3:00 pm to 5:00 pm (Tue & Thu)
**Starting Date – 1st December 2020
The fees mentioned are for 8 sessions (4 weeks).
Cambridge English Classes (online) for both Adults and Young Learners are run all year round. You may start joining any week that suits you fine.
Duration depends on the current English level of the student and how far he or she wants to achieve in his or her English language proficiency.
Maximum number of participants per class – 12
When you make the payment for the registration and fees, please mention your full name, age, occupation, educational background or qualifications, contact number, email address and the class you are enrolling for. Then the screen shot should be sent to bsieducation.myanmar@gmail.com or Blue Sky International Facebook Messenger. We will be sending you the Zoom link, and the coursebooks pdf (e-books). If you want to come buy the coursebooks at Blue Sky International, please let us know an hour in advance before you come. If you want to book for your English language proficiency level test, you need to pay for the registration fees (40,000 kyats) first. You will get to bookatime slot for the test, and receive the Zoom link for the interactive online test afterwards.
AYA – 0223 2010 1000 5690
Reach us at 09 504 3135.
Private Group/ Individual Online Coaching
Online classes, individual coaching sessions and offline in-person classes are organised by Teacher Wendy @ Hla Win May Oo, along withagroup of well-trained and well-qualified teaching associates.
E-2, Unit 1 & 5, Dhamma Darna Street,
#BSI #Supporting_Dreams #Caring #Sharing
We have proven records of success in teaching Cambridge English courses for over 14 years.
💎Improve your English step by step with us.💎
ကျွန်မတို့ရဲ့ Blue Sky International Learning Academy က ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေတဲ့ online class learner တွေကို အောက်ပါအတိုင်း အုပ်စု (၃) စု ခွဲထားပါတယ်။
1. English for Young Learners (aged 8 to 13)
2. English for Teenagers (aged 14 to 19)
3. English for Adults (aged 20 and above)
💥တက်ရောက်မည့်သူရဲ့ယခုလက်ရှိ English Level ကို စီစစ်ပြီး သူနဲ့ သင့်တော်တဲ့ အဖွဲ့မှာထည့်ပေးပါတယ်။
💥 တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီကို ဂရုစိုက်မှု (Individual Attention) ရှိအောင် Online Class တစ်ခုမှာ အများဆုံး (၁၂) ယောက်သာ ထားရှိပါတယ်။
💥 တစ်ဦးချင်းသီးသန့် တက်ရောက်လိုသူများအတွက်လည်း စီစဉ်ပေးပါတယ်။
💥 အဓိက သင်ရိုးကို Cambridge University က ထုတ်တဲ့ စာအုပ်တွေကို သုံးပါတယ်။ မြန်မာပြည်အနှံ့က တက်ရောက်ကြတဲ့ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေအတွက် ပြဌာန်းစာအုပ် soft copies (pdf) ကို email ပို့ပေးပါတယ်။ မိမိတို့ဘာသာ print ထုတ်ရပါတယ်။
💥 Listening, Speaking, Reading, Writing ဘာသာစကားစွမ်းရည် (၄) မျိုးလုံးကို ဘက်ညီညီတိုးတက်အောင် သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးပါတယ်။
💥 Level တွေကိုတော့ ဘာသာစကားစွမ်းရည် အဆင့်ကို သတ်မှတ်တဲ့ နိုင်ငံတကာစံ ဖြစ်တဲ့ CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages) အရ တက်ရောက်သူတွေကို စနစ်တကျ အုပ်စုခွဲပြီး သင်ပါတယ်။
💎English Basic User (A1, A2)
💎English Independent User (B1, B2)
💎Proficient English User (C1, C2)
CEFR level အကြောင်းကို အောက်ပါလင့်ခ်မှာ အသေးစိတ် ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ Level ကိုလည်း link မှာပါတဲ့ test များဖြေဆိုကြည့်ပြီး အကြမ်းဖျင်း ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။https://www.examenglish.com/CEFR/cefr.php
💥 Level တစ်ခုကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တက်မြောက်ဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမယ် ဆိုတာ သင်ယူသူရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ၊ ဘာသာစကားကို သင်ယူရာမှာ လက်ခံနိုင်စွမ်း၊ လေ့လာလေ့ကျင့်နိုင်စွမ်း၊ နဂိုတတ်မြောက်ပြီးသော အဆင့် စသဖြင့် စသဖြင့် ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။
💥 Level တစ်ခုကို (၃) လနဲ့ ပြီးသွားသူ အနည်းငယ်ရှိသလို၊ (၆) လလောက် လုပ်မှ အဆင်ပြေသွားတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ အများစုကတော့ (၁) နှစ်ယောက်လုပ်မှ ကျေကျေညက်ညက် ရသွားကြပါတယ်။
💥အောက်ပါလင့်ခ်မှာ Level တစ်ခုကို (၁) နှစ်နှုန်းနဲ့ (၆) နှစ်တိတိ ကျွန်မတို့ရဲ့ Blue Sky International Learning Academy မှာ တက်ရောက်ခဲ့သူအကြောင်း ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အသက် (၉) နှစ်က စတက်ခဲ့ပြီးတက္ကသိုလ်ဝင်တန်းပြီးတဲ့နှစ်မှာ IELTS ဖြေဆိုတော့ Band Score 7.5 ရခဲ့ပါတယ်။ CEFR level နဲ့ ပြောရင် C1 ပါ။
💥 အောက်ပါ လင့်ခ်က Outstanding BlueSkyian ကတော့ နွေရာသီတွေမှာ အခါအားလျော်စွာ ကျွန်မတို့ရဲ့ Blue Sky International မှာဖွင့်တဲ့ Cambridge English (Movers, Flyers, KET, PET, FCE) တွေကို တစ်ဆင့်ချင်းစီ နှစ်တိုင်းလာတက်ပြီး အဆင့်ဆင့် ထူးချွန်စွာ ဖြေဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ IGCSE စာမေးပွဲတွေပြီးတာနဲ့ IELTS လာတက်ပြီး ဖြေတော့ IELTS Band Score 7.5 ရခဲ့ပါတယ်။ သူ့အကြောင်းကို အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
💥 အောက်ဖော်ပြပါ လင့်ခ်က ကျောင်းသူကတော့ ကလေးမြို့ကနေ ရန်ကုန်မြို့မှာ လာနေပြီး Blue Sky International က ဖွင့်တဲ့ သင်တန်းတွေကော၊ တစ်ဦးချင်းသီးသန့် အချိန်တွေပါ ယူပြီး (၆) လအတွင်း နာရီပေါင်း (၃၀၀) စနစ်တကျလေ့လာကာ IELTS band score6ရရှိပြီး သူမရဲ့ အမေရိကားမှာ ကျောင်းတက်ရန်ဆိုသော ဆန္ဒကို အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ အမေရိကားက ဘွဲ့ရပြီး ကိုးရီးယားနိုင်ငံကို ရောက်ရှိကာ သူမရဲ့ အိမ်မက်ကို အကောက်အထည်ဖော်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ အကြောင်းကို မကြာမီ update လုပ်ပါဦးမည်။
Cambridge English Exams, First English, General English, Key English, Preliminary English. Bookmark.
Outstanding BlueSkyian (7)
Ms. Zin Mar Myint
I am very interested in your class and I want to teach individually.
How can I pay for class fees?
Hello, you may reach us at 095043135 for more information.
I am very interested in your class and I have to learn English speaking.
Ma Ayechan Khaing
I want to join your individual class.